January 18, 2021 Xuseen 3
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna guddoomiyaha Midowga Musharixiinta Madaxweynaha Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa walaac ka muujiyay xaaladda Siyaasadeed ee dalka iyo muranka ka taagan Arrimaha doorashooyinka.
Mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed, oo maanta dalka dib ugu soo laabtay Warbaahintana la hadlay ayaa sheegay inay aheyd in xilligaan howlaha doorashooyinka socdaan balse ay nasiib darro tahay in ilaa iyo hadda aan la isku waafaqsaneyn Arrimaha doorashooyinka dalka.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa uu intaasi ku daray inay rajo weyn ka qabaan in dalkaan ay ka dhacaan doorashooyin xor iyo walaal ah oo lagu wada qanacsan yahay.
Ugu dambeyn Sheekh Shariif ayaa sheegay in weli la heysto fursad looga wada hadli karo khilaafka kajira doorashooyinka, waxaana uu cadeeyay in dalka uu u baahan yahay xasilooni iyo nabad loona turo umadda Soomaaliya.
Waar mid kaloo dhaha Qaala walaahi qaali wallahi madaxweyne ha loo doorto markaas Mogadishu waxay yeelaysaa 4 madaxweyne oo mid thuma walaahi la taagan, mid Qaala wallahi la soo istaaga, mid qorigii 1991 ku xuuxsha iyo mid Gabdho u rata Carabta. Walee Mogadishu way adagtahay si dowlad somaliyeed oo dalka u shaqeysa dadkana u adeegta oga hanaqaado hadaan Reer puntland nahay waa inaynu u dasrnaa muusiga hargeysa waliba mid labo sumeecadood leh oo ku heesin anaku xamar, iyo hargeysaba doonimeyno.
War Abgaalow 2 mid yeela.
1-In aad xabad ku bilowdaan igaarkaan Marexan oo dadkiina qaxisaan,guryihiina dumisaan oo talada ka qaadataan Masters kiina Majeerteen.
2-In aad ka shaqaysaan in doorasho xor iyo xalaal ka hadashaan.
Nimankaan idinku daaban ee hadda soo istaagay Madaxweyne nimo waa ka harnay ee Marexan oo la dhashay meel kastaa ku haya anagaa idinla dilayna Marexan meel idin gayn maayaan kuwii dad u xigay un fiiriya.Ma hayaan Kablalax, ma hayaan Harti,ma hayaan Majeerteen intiisa badan qolo waalan minority ku ah Majeerteen yaanay idin waalin.
@ hanuuniye/ habaabiye adeer nin xanuunsan oo cuqdad qabiil lagusoo canqariyay taariikhda dalkan iyo waxa uu soo marayna aan waxba kala socon ayaad tahaye, majeerteen iyo mareexaan waa labo reer walaalo ah , waxa meesha yaal waxa weye siyaasada dowlada ini Farmaajo oo ah kaligii talisnimo ku tumasho shuruucdii dalka degsanayd taas oo ah tii somali horay ugusoo hoogtay. Majeerteen horay ayay uga dagaalameen dictator nimo iyo anaa iri mana qaataan amar ku taaglayn hada lagu jiro qarnigii 21 tanaad na aqbalimayaan caqliyada xun ee ini Farmaajo somalina aqbalimayso. Majeerteen dalkan wax badan ayuu gashtay xoriyadiisii iyagaa usoo halgamay ururkii SYL iyagaa asaasay 5 ka mid ah xubnaha ururkaasi oo uu ku jiro asaasihii Daahir xaaji Cismaan majeerteen ayay ahaayeen, markii dictatorkii ini siyaad hadaan ka tuuray qarankii soomaliya majeerteen ayaa soo ceshay naf iyo maalna ku baxshay, sidaa daraadeed yeelimayaan in mid qurbaha kasoo tahriibay oo aan waxba ku darsani mar labaad hadaan ka tuuro qaranimada dalkan. Waxaad ku hadaaqday majeerteen inuu xukun ka rajo dhigay adeer majeerteen dalkan laba jeer ayuu hogaanka u qabtay toban marna priminister ayay kasoo noqdeen xiisa badana uma qabaan xukun balse marnaba ma yeeli doonaan dalkan in lagu ciyaaro dowladnimadiisa, majeerteen ini Farmaajo ayagaa soo saaray 70 cod na siiyay mana soo baxeen haduusan codadkaa helin oo ay xasan sheikh siinlahaayeen. Waxaa kaa buuxa cuqdad qowmiyad magac iyo sharaf ku leh aduunka waxse ugu dhibi maysid adiga ayaa u bakhtiyin. Inangumeed na always inangumeed majeerteen waa qaran calan u taaganahay yahay ini Farmaajo iyo yaaf yaafta Daarood ee cuqdadaysana harka majeerteen ayay harsadaan ayakoo caloosha kawada jirin lkn who cares.